मानवसागरमा एक दिन- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
मानवसागरमा एक दिन
एकै पटक लाखौं मानिसले त्रिवेणीमा डुबुल्की लगाएको दृश्यलाई क्यामरामा कैद गर्न फोटोग्राफरबीच पनि तँछाडमछाड थियो । केही त पानीमै भिजेर तस्बिर लिइरहेका थिए । साधुहरू तथा सन्तहरू पनि के कम ?
माघ २६, २०७५ सुरेशराज न्यौपाने
काठमाडौँ — यागराज, भारत । कुम्भ भन्नासाथ लाखौं तीर्थालु, भागाभाग, आफन्तजनबाट विछोड भन्ने आमबुझाइ छ ।
अरूले भनेका र सुनाएका आधारमा कुम्भसम्बन्धी त्यही किसिमको तस्बिर बने पनि त्यसलाई प्रत्यक्ष हेर्ने र अवलोकन हेर्ने जिज्ञासा भने कायमै थियो । त्यही जिज्ञासा मेटाउने राम्रो अवसर बन्यो यस पटकको माघे औंसी । भारतको उत्तरप्रदेश राज्यको प्रयागराज (यसअघिको अलाहावाद) ३० पुसदेखि सुरु भएको कुम्भमा त्यसमा पनि २१ माघ थप विशेष थियो । सोमबार र औंसी दुवै परेको र दोस्रो शाही स्नान पनि परेकाले त्यस दिन गंगा–जमुना–सरस्वतीको (अहिले सरस्वती नदी नरहे पनि परापूर्वकालमा रहेको धार्मिक र जनविश्वास) त्रिवेणीमा नुहाउन लाखौं श्रद्धालुहरूको भीड लागेको थियो ।
कुम्भका बेला हिन्दु पात्रोका आधारमा शाही स्नानका लागि विशेष मिति तय गर्ने प्रचलन छ । यस वर्ष मकर संक्रान्ति, माघे औंसी र वसन्त पञ्चमीका दिन महास्नान तय गरिएको थियो ।हिन्दु पात्रोअनुसार आइतबार साँझ करिब सवा एघार बजेदेखि माघे औंसी लाग्ने भए पनि शाही स्नानको शुभमुहूर्त भने सोमबार बिहान करिब पौने छ निर्धारण गरिएको थियो । भारतका विभिन्न ठाउँ र विदेशबाट आएका श्रद्धालुदेखि पर्यटकसम्म यही घडीको प्रतीक्षामा थिए सबै तीर्थालुहरू । सोमबार बिहान करिब पाँच बजे त्रिवेणीपारिबाट साधुसन्त र भक्तहरूको लस्कर शाही स्नानका लागि प्रस्थान गर्छ । सुरक्षाकर्मीलाई अगाडि लगाएर बाजागाजासहित हिँडेको विभिन्न अखडाको ब्यानर बोकेर उक्त लस्करको प्रमुख आकर्षण थिए नागा साधुहरू । घोडामा सवार ती नागाहरूमध्ये केहीका हातमा त्रिशूल थिए भने केहीले नगाडा बजाइरहेका थिए । भस्मलेपन गरेका नागा साधुहरूको हरहर गंगे, जयश्री राम र हरहर महादेवको आवाजले पूरै वातावरण गुन्जिएको थियो । उनीहरूलाई साथ दिइरहेका थिए सडक किनारमा उभिएका तीर्थालुहरू । नागा साधुका पछाडि थिए, सन्त महात्मा । तीमध्ये केही कोही बग्गीमा त कोही पैदलै थिए । उनीहरूको पछाडि थियो साधु र भक्तजनहरू ठूलो ताँती थियो ।
त्रिवेणी संगममा केही बेरको पूजापाठपछि बिहान करिब पौने छ बजे शाही स्नानको आरम्भ भएको औपचारिक घोषणा हुन्छ । त्यसपछि शाही स्नानका लागि भनेर विशेष रूपमा तयार पारिएको त्रिवेणी संगममा हरहर गंगे भन्दै नागा साधुहरू हाम फाल्छन् । उनीहरूका पछिपछि लाखौं भक्तजन पनि त्रिवेणीमा डुबुल्की लगाउन थाल्छन् । बिहानबाट सुरु भएको स्नानको क्रम दिनभरि नै चलिरह्यो । विभिन्न तेह्र अखडा, दर्जनौं पीठका प्रमुखदेखि साधुसन्तहरू भक्तहरूको लावालस्करसहित स्नानका लागि पुगेका थिए । उनीहरूकै पछिपछि हुन्थे तीर्थालुहरू । बालबच्चादेखि वृद्धासम्म । एकैपटक लाखौं मानिसले त्रिवेणीमा डुबुल्की लगाएको दृश्यलाई क्यामरामा कैद गर्न फोटोग्राफरबीच पनि तँछाडमछाड थियो । केही त पानीमै भिजेर तस्बिर लिइरहेका थिए । साधुहरू तथा सन्तहरू पनि के कम ? आफूतिर क्यामरा सोझिएको देख्नासाथ उनीहरू पनि पोज दिन सुरु गरिहाल्थे ।
शाही स्नानको मौका छोप्न उर्लिएको भीडलाई व्यवस्थापन गर्न सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवकलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । तर, हजारौं संख्यामा रहेका स्वयंसेवक र सुरक्षाकर्मीका कारण कुनै अप्रिय घटना भने भएन ।कुम्भ नेपालबाट समेत हजारौं श्रद्धालु पुगेका थिए । तिनैमध्येका हुन् वीरगन्ज १८ का, रत्नलाल रौनियार । वीरगन्ज, जितपुरका चार सयभन्दा बढी तीर्थालुसँगै उनी कुम्भ पुगेका हुन् । ‘पुण्य प्राप्तिका लागि हामीहरू एक ढिक्का भएर कुम्भ आएका हौं,’ उनले बताए । सोमबार साँझ त्रिवेणीको जल लिएर उनको टोली विहारको अरेराज जाने र त्यहाँको शिव मन्दिरमा उक्त जल चढाएर मात्र वीरगन्जतर्फ लाग्नेछ । गंगा जल शिव मन्दिरमा चढाएपछि मनोकांक्षा पूरा हुने र धर्म हुने विश्वास रहेको समेत उनले बताए ।
प्रयाग कुम्भका सूचना अधिकारी दिलीपकुमार त्रिगुणायतका अनुसार २१ माघसम्ममा साढे बाह्र करोड तीर्थालु आएका थिए । माघे औंसीको दिनमा मात्रै पाँच करोडले स्नान गरेको त्रिगुणायतको दाबी छ । साथै आगामी २० फागुनसम्ममा थप चार करोडले कुम्भ मेला भर्न आउने अनुमान गरिएको समेत उनले बताए । करौडौं तीर्थालुको व्यवस्थापन चानचुने कुरा होइन । कुम्भकै लागि भनेर गंगा किनारको करिब ५.५ किलोमिटर परिधिको भूभागलाई विशेष रूपमा निर्माण गरिएको थियो । साधुसन्तका अखडा, आश्रमदेखि तीर्थालुहरूका लागि वासस्थानसम्म । स्वदेशी तथा विदेशीका पर्यटकहरूका लागि भनेर विशेष खाले टेन्ट । तीर्थालुहरूका रेलका डिब्बाझैं लाग्ने लामा–लामा शौचालयको व्यवस्था गरिएको थियो । भीड व्यवस्थापनका लागि भनेर मेलामा आउने र जाने बाटो बेग्लाबेग्लै बनाइएको थियो ।
चुस्त व्यवस्थापनका कारण यति धेरै संख्यामा तीर्थालुको उपस्थिति भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि अप्रिय घटना नभएको त्रिगुणाको दाबी छ । ‘तीर्थालुको संख्या र कुशल व्यवस्थापन दुवै हिसाबले यो कुम्भले इतिहास रचेको छ,’ उनले भने ।हुन पनि प्रयाग कुम्भमा उर्लेको मानवसागर र त्यसको व्यवस्थापन आफैंमा उदाहरणीय बनेको छ । त्यही भएर नै युनेस्कोले प्रयागकुम्भलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृतसमेत गरेको छ । त्यसले पनि यसको विशालता र भव्यता पुष्टि गर्छ ।
प्रकाशित : माघ २६, २०७५ ११:५८
हाम्रो अगाडि सयौँ रथहरू खडा थिए । हरेक रथमा विभिन्न अखडाका सन्त–महन्तहरू विराजमान थिए । हामीभन्दा पछाडि सुपरिचित पाइलट बाबाको रथ पनि थियो । यसै क्रममा नागा बाबाहरूको हजारौँको जुलुस देखा पर्‍यो । हाम्रा लागि यो निकै उदेकलाग्दो थियो ।
माघ २६, २०७५ गुरुराज घिमिरे
काठमाडौँ — सनातन हिन्दु परम्पराको महान् उत्सव कुम्भमेलाको आध्यात्मिक तथा धार्मिक महत्त्व अतुलनीय छ ।
हरेक तीन वर्षमा लाग्ने कुम्भ, ६ वर्षमा लाग्ने अर्धकुम्भ र १२ वर्षमा लाग्ने महाकुम्भमा संसारभरका साधु–संन्यासी, सन्त र गृहस्थ गरी करोडौं साधक र तीर्थालुको उपस्थिति हुने गर्छ । चिनियाँ यात्री हू एन सानले छैटौं शताब्दीमा गरेको यात्रा वृत्तान्तमा प्रयागराजमा हुने कुम्भ मेलाको चर्चा गरेको पाइन्छ ।
हजारौं रथहरू, लाखौं–करोडौं दिव्यआत्मा, असंख्य तीर्थयात्री, विभिन्न भाषा संस्कृति र सम्प्रदायहरू तथा यो लौकिक जीवनमा दृश्यपान गर्न नपाइने अद्भुत दृश्यहरू कुम्भमा देख्न पाइन्छ । न भोक, न प्यास, न लोभ, न आसक्ति । समर्पणको अद्भुत नमुना हो— कुम्भ मेला । कुम्भमा गंगाको पूजन र स्नानलाई धेरै ठूलो पुुण्य मानिन्छ । कुम्भ स्नानलाई आस्थाको डुब्की पनि भनिन्छ । तीर्थयात्री आफूले लगाएको वस्त्रसहित गंगामा चोबलिन्छन् । कतिपय वस्त्र फुकालेर पनि डुब्की लगाउँछन् ।
धेरैअघिदेखि बूढापाकाहरूबाट चर्चा सुनेको र पढेको महान् तीर्थको चर्चा यसपालि एउटा धर्मसभामा भयो । तीर्थयात्रालाई बुढ्यौलीको काम ठानेर हामी अधिकांश निच मारेरै बसिरहेका हुन्छौं । हिन्दु धर्मको मान्छेको आयु व्यवस्थापन सिद्धान्तअनुसार हामी गृहस्थाश्रमभित्रै थियौं, वानप्रस्थ नजिकै । हामी केही गृहस्थहरू यसपालि ६ वर्षे अर्धकुम्भमा प्रयागराज जाने निधो गर्‍यौँ । मकर संक्रान्तिकै दिन गंगा स्नान गर्नका लागि कम्तीमा एक दिनअघि नै मेलास्थल पुगिसक्नुपथ्र्यो । हाम्रो मुख्य टोलीमा आठ जना सदस्य सामेल थियौँ । गोविन्द ढुंगाना, टेकराज पौडेल, प्रवीण ओझा, सुरज भट्टराई, मनोज खड्का, पुण्य ढुंगाना, मनोज खड्का (माइकल) र म । २०७५ पुस २७ मै हामीले गेरुवस्त्र तयार गर्‍यौँ, अनि रुद्राक्षको माला पनि । यस्तो पोसाकमा सहभागी हुँदा साधुहरूको भीडमा आफूलाई हराउन सजिलो हुन्छ भन्ने ठान्यौँ ।
हाम्रो यात्रा काठमाडौँबाट प्रारम्भ भयो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा पहेंलो टोपी र रुद्राक्षको माला लगाएका अधबैंसे तथाकथित सन्तहरूको टोलीले सबै यात्रुको ध्यान खिचेको थियो । भोलिबाट विराटनगरको जोगवनी हुँदै प्रयागको यात्रा प्रारम्भ हुँदै थियो । सीमाञ्चल एक्सप्रेसमा सिट बुकिङ भइसकेको थियो । अब हामी खानपिनमा सात्त्विक बन्ने भयौं । म आफू भने विगत १३ वर्षयता शाकाहारी नै छु । मारवाडी बासामा खाना खाइयो । पुस २७ गते विराटनगरमा सामान्य किनमेल सकेर अपराह्न ६ बजे हामी लाग्यौं जोगवनीतर्फ । जीवनमा पहिलो पल्ट गेरुवस्त्रको तयारी गरेर हामी तीर्थत्रायामा निस्केका थियौँ ।
प्रयागराजमा लाग्ने कुम्भलाई विशेष कुम्भ मानिन्छ । यो पटक प्रयाग कुम्भमा झन्डै १५ करोड तीर्थालुले गंगा स्नान गरेको अनुमान छ । झन्डै ५० करोड भारुको लागतमा तीन नदीको संगमस्थलमा अस्थायी नगर बसाइएको छ । ४५ वर्गकिमिमा फैलिएको यस क्षेत्रमा तीर्थालुबाट झन्डै ४५ सय करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । १ लाखको संख्यामा अस्थायी शौचालय, पाँचतारे होटलका सुविधायुक्त पन्डाल, सन्त र धर्म गुरुहरूका लागि विशेष पन्डाल र अन्य सामान्य पन्डाल गरी हजारौं अस्थायी गृह निर्माण गरिएको छ । साधुका विभिन्न १३ अखडाका आफ्नै क्षेत्रहरू छन् । आ–आफ्नो आचार्य महामण्डलेश्वर र महामण्डलेश्वर, श्री महन्त र महन्तहरू छन् । हामीसँग नेपालकी महिला साध्वी जुना अखडाकी महामण्डलेश्वर हेमानन्द गिरी हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै कारण हाम्रो तीर्थ टोलीलाई यस पटक विशेष सुविधा प्राप्त थियो । हामीले सामान्य संन्यासीदेखि जुना अखडाका आचार्य महामण्डलेश्वर अवधेशानन्द गिरी महाराजसम्मलाई भेट्यौँ । त्यस्तै जुना अखडाका अन्तर्राष्ट्रिय महामन्त्री श्री महन्त हरिगिरीजी महाराजसँगसमेट भेट भयो । हाम्रो टोलीलाई अरू तीर्थयात्रीभन्दा निकै सहज भयो । प्रयाग पुगेका तेस्रो दिन हामी रथमा बसेर शाही स्नानका लागि गंगा, जमुना र सरस्वती संगममा प्रस्थान गर्‍यौं । हाम्रो टोली सुरक्षित आश्रममा बसेर गंगा स्नानका लागि पन्डालतर्फ जाँदै थियो तर सडकमा देखिएको दृश्य कारुणिक थियो ।
हाम्रो अगाडि सयौँ रथहरू खडा थिए । हरेक रथमा विभिन्न अखडाका सन्त–महन्तहरू बिराजमान थिए । हामीभन्दा पछाडि सुपरिचित पाइलट बाबाको रथ पनि थियो । यसै क्रममा नागा बाबाहरूको हजारौँको जुलुस देखा पर्‍यो । हाम्रा लागि यो निकै उदेकलाग्दो थियो । अधिकांश बाबाजीको शरीरमा कुनै वस्त्र थिएन । महिला नागा संन्यासीहरू भने एकसरो वस्त्रमा थिए । आ–आफ्नो सुविधाअनुसार त्यहाँको भीड छिचोल्दै पानीमा डुब्की लगाउन थाल्यौँ । यति बेला झन्डै बिहानको छ बज्नै लागेको थियो । असाध्यै चिसो बतास चलिरहेको नदी किनारमा जम्मा भएको विशाल भीडले पालैपालो संगममा डुब्की लगाउँदा देखिएको दृश्य साँच्चै नै दुर्लभ थियो ।
हरहर महादेव, जय गंगे, जय भोलेनाथ, ॐ नमो: नारायणजस्ता ध्वनिहरू हरेक श्रद्धालु तीर्थयात्रीहरूको मुखबाट निस्किरहेका थिए । सायद हाम्रो मुखबाट पनि । केही क्षण विश्राम गरेर आ–आफ्नो पोकापन्तरा बोकी पुन: जुना अखडाको मुख्यालयतर्फ फर्कियौँ । यसरी हाम्रो मकर स्नानले अन्तिम विराम पायो र सनातन परम्पराको एउटा पवित्र आयोजनाको स्मरणीय हिस्सा बन्ने अवसर प्राप्त भयो ।
प्रकाशित : माघ २६, २०७५ ११:५५